Tencent, Alibaba, B-station မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ သော အပြာရောင် စကားလုံး ဂိမ်း - Pandaily
Dec 08, 2021, 12:05ညနေ 2021/12/09 01:11:06 Pandaily
တရုတ် မိုဘိုင်း ဂိမ်း တီထွင် သူနှင့် ထုတ်ဝေသူ Qingci Gamesတနင်္လာနေ့က ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် တရားဝင် စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အလားအလာ အရ ကုမ္ပဏီသည် IPO တွင် ရှယ်ယာ ၈၅ သန်း ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပြီး ၇၆. ၅ သန်းကို နိုင်ငံတကာ တွင် ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပြီး ကျန် ၈. ၅ သန်းကို ဟောင်ကောင်တွင် လူသိရှင်ကြား ရောင်းချ မည်ဖြစ်သည်။
Qingci Games သည်၎င်း၏ စတော့ရှယ်ယာ ကို ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၁. ၂ မှ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၄. ၀၀ ဖြင့် ရောင်းချ ခဲ့ပြီး ကြာသပတေးနေ့ တွင်အဓိက ဘုတ် အဖွဲ့တွင် တရားဝင် စာရင်းဝင် မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဤ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေမှု အပြီးတွင် Qingci Games သည်၎င်း၏ ထုတ်ကုန် အစုစု ကိုတိုးချဲ့ ရန်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဂိမ်း သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စွမ်းရည် များ နှင့်ဆက်စပ်သော နည်းပညာ များ ကိုမြှင့်တင်ရန် ရန်ပုံငွေ အသစ် များကိုအသုံးပြု လိမ့်မည်။ လာမည့် နှစ် နှစ်မှ သုံး နှစ်အတွင်း တရုတ် မိုဘိုင်း ဂိမ်း ဈေးကွက်တွင် ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လည်ပတ် ခြင်းများ ကိုတိုးမြှင့် ခြင်းအားဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံခြား စျေးကွက် တွင် စီးပွားရေး တိုးချဲ့ ရန်မျှော်လင့် နေသည်။
Blue Ci Games ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မိုဘိုင်း ဂိမ်း ၆ ခုနှင့် ဂိမ်း အရံ ၁၀ ခုရှိသည်။ မိုဘိုင်း ဂိမ်း ခြောက် ခုမှာ “Yugong Yishan 3”, “Eternal Adventure”, “Lantern and Dungeon”, “God of War Virus”, “Troll and Dungeon” နှင့် “Magic Snail” တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက် “Lantern and Dungeon” နှင့် “God of War Virus” တို့သည် အေးဂျင့် ဂိမ်း များဖြစ်ပြီး ကျန် ၄ ခုမှာ ပြည်တွင်း ၌ ဖြစ်သည်။
စတင် ပြီးနောက် ပထမ လတွင် celadon ဂိမ်း ၏ ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ထားသော Magic Snail သည် ဝင်ငွေ ယွမ်သန်း ၄၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန် လမှ ဒီဇင်ဘာ လအထိ လစဉ် တက်ကြွသော အသုံးပြုသူ ၄. ၄ သန်းကျော် ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ iOS ဂိမ်း အရောင်း ရ ဆုံး စာရင်းတွင် ဒုတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။
ထို့အပြင် Qingci ၏ မိုဘိုင်း ဂိမ်း ၁၀ ခုအနက် ၄ ခုသည် ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ထားသော ဂိမ်း များဖြစ်သည်။ WeMedia Leidi ၏အဆိုအရ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် Qingmagnetic သည် လမ်းကြောင်း အမျိုးအစား RPG ဂိမ်း အသစ် ဖြစ်သော Time Travel Agency ၊ အပန်းဖြေ ဂိမ်း Magic Project နှင့် Blade Heart2၊ RPG ဂိမ်း “Ares Virus 2” နှင့် လှုပ်ရှားမှု အမျိုးအစား RPG ဂိမ်း “Just Run” တို့ကို စတ င်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တစ် နှစ်တာ ၏ iPhone ဂိမ်း: League of Legends: Wild Crack
ယခုနှစ် April ပြီ လတွင် Qingci Games သည် Tencent , Alibaba နှင့် Station B မှ မဟာဗျူဟာမြောက် ရန်ပုံငွေ ယွမ် ၃ ၀၃ သန်း ရရှိခဲ့သည်။ မေလတွင် ကုမ္ပဏီ သုံး ခုနှင့် Boyu Capital တို့သည် Qingci Games မှ ထုတ် ပေးသော အစုရှယ်ယာ အသစ်များကို ယွမ် ၁၀၁ သန်း ဖြင့် စာရင်းသွင်း ခဲ့သည်။ IPO မတိုင်မီ Tencent , Alibaba , Station B နှင့် Boyu Capital တို့သည် Qingci ဂိမ်း နှင့် nbsp ၏ ၄. ၉၉% ကိုပိုင်ဆိုင် ကြောင်း အလားအလာ ကဖော်ပြသည်။ 4.99%, ၄. ၉၉% ၊ Qingci Games တွင် ၁. ၈၇% ရှိသည်။
“The Chinese Electricity Weekly”: Hero League ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေဟာင္း Uzi သည္ Elephant Media တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး Tencent က ၂.၆ သန္းတန္ Tencent အဖြဲ႕၏ စစ္နည္းဗ်ဴဟာၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေၾကညာျခင္း
Gaming Mar 05 မတ် 5, 2021
ဇြန္ ၁၆ ရက္က Tencent သည္ Heinan အပန္းေျဖစခန္းတြင္ ေဆာ့၀ဲလ္Community of the Sea International Convention Congress of the Year of the Sea International Congress of the Electricity of the Electricity of the Electricity of the Special
Gaming Jun 18 ဇွန် 18, 2021